‘बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर योजना ल्याइने छन्’
प्रकाशित: २०७४ भाद्र २४ , १२:०८ बजे
– अर्जुन ढकाल, (वडाध्यक्ष)
बेलौरी नगरपालिका–४ कञ्चनपुर
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि मतदाताको अपेक्षा अनुसार कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्नमा सक्रिय छन् । चुनाव प्रचारका क्रममा गरिएका वाचा पूरा हुने आशामा मतदाता रहेका छन् । वाचा पूरा गर्न जनप्रतिनिधिले गरिरहेका काम र वडाको विकासका योजनाबारे बेलौरी नगरपालिकाको ४ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष अर्जुन ढकालसँग पत्रकार भवानीदत्त भट्टले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हामीहरू टोलटोलमा जाने र योजना छनौट गर्ने काममा व्यस्त छौ । र, योजना छनौटको सन्दर्भ, विकासको सन्दर्भ, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कहाँ कति बजेट दिन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा मध्नजर गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।
– विगतमा तपाईले समाजका लागि गर्नुभएको योगदान के हो, जसले तपाई वडाध्यमा निर्वाचित हुनुभयो ?
– म २०५४ सालमा अनेरास्ववियू जिल्ला कमिटीमा आवद्ध भएर निरन्तर काम गर्दै आए । २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा म अनेरास्ववियूको जिल्ला कमिटी उपाध्यक्ष थिए । म निरन्तर पार्टीसँग आवद्ध भएका कारणले र म युवा भएका कारणले यहाँका वडावासीले मलाई भोट दिएर विजय गराएका हुन् ।
– तपाई वडाध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
– बेलौरी नगरपालिकाको ४ नम्बर वडामा धेरै चुनौति छन् । यसलाई मध्यनजर गर्दै सर्वप्रथम यहाँको ढलनिकासको समस्या छ, त्यसैगरी अव्यवस्थित सहर बजार रहेका कारणले छाडा प्रकारले व्यवसाय गर्दै आइरहेका पाइएको छ । बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ को सीमाना यस वडासँग पनि पर्ने भएकाले भन्सार भएर आउने सामानले गर्दा पनि स्थानीय व्यापारीलाई धेरै समस्या परिरहेको हामीले देखेका छौ । यस वडामा सडकको समस्या, देशकै युवा बेरोजगारी समस्या रहेको छ । त्यसैले यी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सुल्झाउने छौं ।
वडाका वासिन्दाको जीवनस्तर माथि उकास्न र विकासका लागि दीर्घकालीन योजना के छ ?
– हाम्रो समस्या भनेको ढलनिकासको समस्या, बाटोघाटोको समस्या र बेरोजगार युवालाई लक्षित कार्यक्रम ल्याउने हाम्रो योजना हो ।
चुनाव प्रचारका बेला थुप्रै आश्वासन बाँड्नुभयो, त्यहाँका वासिन्दालाई दिएका वाचा कसरी पूरा गर्नुहुन्छ ?
– हामीलाई विश्वास गर्नुस्, हामीले गर्न सक्ने काम पूर्वाग्रही नराखिकन निष्पक्ष ढंगले गर्नेछौं । हामीलाई विश्वास दिनुस्, हाम्रो पार्टीलाई जिताउनुहोस् भनेर भोट मागेका छौं । र, जनतालाई पनि विश्वास छ कि नेकपा एमाले पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रतिनिधिले केही गर्न सक्छन् । हामीले जुन आश्वासन दिएका थियौं, ती आश्वासन भनेका सडक, खानेपानी लगायतका आश्वासन रहेका छन् । तिनीहरूलाई क्रमिक रुपमा ५ वर्षमा पूरा गर्न सक्छौ भन्नेमा हामी लागिरहेका छौं ।
हालसम्म्म तपाईको राजनीतिक जीवन यात्रा कस्तो रह्यो ?
– म २०५४ सालदेखि अनेरास्ववियूमा आवद्ध भएर २०६२/०६३ मा अनेरास्ववियूको जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष पनि भएर काम गरे । मैले अनेरास्ववियूको अञ्चल कमिटीको सदस्यसम्म पनि रहेर काम गरेको हुँ । म २०६१ सालदेखि नेकपा एमालेको संगठित सदस्य पनि भएको हुँ र मैलै यसै सालमा हाम्रो बेलौरी नगरपालिकाको नगर कमिटी सचिव पदमा इच्छा जाहेर गरेको थिए र केही मतले पराजित भएको थिए । म पार्टीको संगठित सदस्य हुँ र मलाई पार्टीले टिकट दियो र म निवार्चित भए ।
राजनीतिक दलको कार्यकर्ताको रुपमा काम गर्दा र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुमा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
– जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामीसँग थुप्रै चुनौति छन् । हामीसँग जुन अधिकारहरू छन्, ती अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छौं र सामान्य नागरिक हुँदाखेरि हामीले ती अधिकार प्रयोग गर्न सक्दैनौं । त्यसैले सामान्य नागरिक भएर काम गर्नुमा र जनप्रतिनिधि भएर काम गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ । हामी सबैलाई समेटेर समान रुपले अगाडि बढिरहेका छौ र मेरो लक्ष्य पनि सबैले समझदारीका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक हिसाबले हामीले चुनाव लड्यौ र चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि भइसकेपछि हामी साझा व्यक्ति हौ र साझा व्यक्तिको हिसाबमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मैले अठोट लिएको छु ।
धेरै सर्वसाधारण वडाबाट पाउने सेवा सुविधाबारे अनभिज्ञ छन् । सर्वसाधारणलाई त्यसबारे जानकारी दिन के गरिरहनुभएको छ ?
– हामीले वडाबाट दिने ३८ वटा काम र कर्तव्य हुन्, हामी दिइरहेका छौं । वडामा काम लिएर आउने सबैको काम गरिरहेका छौं । अहिले धेरै नै अधिकार वडा तहलाई नै दिएको छ, गाउँगाउँमा गएर वडाले गर्ने काम सम्बन्धमा भेटेर नै छलफल गरिरहेका छौं ।
तपाईको वडामा रहेको बेलौरी बजारलाई कस्तो सहर बनाउने योजना बनाउनुभएको छ ?
– राज्यले स्मार्ट सिटीको अवधारणा ल्याएको छ । स्माट सिटी त भनेको छ । तर, यसअन्तर्गत के कस्तो हुने कुनै गुरुयोजना चाहिँ तयार भएको छैन । यसकारणले यसलाई कस्तोभन्दा पनि व्यवस्थित सहर बनाउनुपर्ने हो । जुन अव्यवस्थित तवरले भवनहरू निर्माण भइराखेका छन्, त्यसलाई मापदण्ड अनुसार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो ।
तपाईको वडामा मदिराको कारोबार अथाह रुपमा भइरहेको छ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
– होटलले मदिरा कारोबार गरिरहेका छन्, त्यसका लागि हामीले कुनै निश्चित समयमा मदिरा बेचबिखन गर्न पाइने सम्बन्धी केही कार्यक्रम ल्याई त्यसका आधारमा यो मदिरा बेचबिखनमा नियन्त्रण गर्न सक्यौ भने वडाको विकासमा सहजता हुन्छ ।
बजारमा कालोबजारी मौलाएको अवस्था छ, यसलाई कसरी नियन्त्रणमा लिनुहुन्छ ?
– भन्सार हुँदै भारतबाट अवैध कुुखुरा, चल्ला र अन्डा आउने गरेका छन्, यसलाई हामीले अब तुरुन्तै रोक्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएका छौं । भारतबाट कम मूल्यमा उत्पादन भएर नेपाल आउने गरेको छ र यहाँ उत्पादन गर्नका लागि कृषक बढी मूल्यमा त्यो उत्पादन भइराखेको अवस्थाले गर्दा यहाँका व्यापारी धरासायी हुन पुगेका छन् । यसलाई नियन्त्रणका लागि हामीले तुरुन्तै निगरानी गर्नुपर्छ । इन्डियाबाट भइरहेको कालोबजारीलाई हामीले तुरुन्त भन्सारसँग समन्वय गरेर र सशस्त्रसँग समन्वय गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना बनाएर अघि बढ्ने सोच बनाएका छौं ।